February 5, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha February 5, 2020
(Barcelona) 05 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay liiska rasmiga ah ee ka kooban 18-ka ciyaaryahan kuwaasoo uga qeyb galaya kulanka Athletic Bilbao ee Copa del Rey. Lionel Messi iyo Griezmann ayaa hoggaaminaya liiska xiddigaha Kooxda Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka Athletic Bilbao ee Copa del Rey, iyadoo Vidal uu dib u […]Sii akhriso
(Madrid) 05 Feb 2020. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka Real Sociedad ee Copa del Rey. Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa kooxda Real Madrid ayaa waxay habeen dambe ku soo dhaweyn doonaan naadiga Real Sociedad garoonka Santiago Bernabéu si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan […]Sii akhriso
(Manchester) 05 Feb 2020. Waxaa la shaaciyey 10-ka ciyaaryahan ee Portuguese-ka ah kuwaasoo ugu qaalisan Premier League, waxaana arrintaan ay soo shaac baxday marka ciyaaryahanka reer Portugal ee Bruno Fernandes uu ku biiray Man United. Bernardo Silva ayaa hoggaaminaya Liiskan, kaasoo qiimihiisu yahay 100 milayn oo euro, Bruno Fernandes ayaana booska labaad ka soo muuqday, Sii akhriso
(Paris) 05 Feb 2020. Ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta PSG iyo xulka qaranka Argentine ee Angel Di Maria ayaa si cad u sheegay inuu iska diiday xirashada lambarka 7-aad ee kooxda Manchester United waqtigii uu kaga soo biiray naadiga Real Madrid sandkii 2014-kii. Lambarka 7-aad ee Kooxda Manchester United, waxaa soo xirtay halyeeyo waa weyn oo […]Sii akhriso
(Barcelona) 05 Feb 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka mid ah ciyaartooyda u sharraxan abaal-marinta ‘Sports Cultura Barcelona Award’. Abaal-marinta dhaqanka iyo isboortiga Barcelona ayaa la siiyaa dhammaan shaqsiyaadka ciyaaraha noocyadooda kala duwan kuwaasoo wax muuqda ku soo kordhiyey Magaalada Barcelona. Leo Messi ayaa musharrixiinta Sii akhriso
Wasiirka Kalluumeysiga oo Qado Sharaf u sameeyay Isimada Puntilad iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida
Soomaaliya February 5, 2020
Muqdisho (SONNA)-Wasiirka Kalluumeysiga iyo Khayraadka badda Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa maanta qado sharaf u sameeyay isimada Puntland iyo dowlad deegaanka oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Muqdisho. Isimada oo munaasada qado sharafta ah ka hadlay ayaa wasiirka uga mahad celiyay soo dhaweynta iyo qado sharafta qiimaha leh. Qado sharafta ayaa waxaa kasoo qayb galay Sii akhriso
(Manchester) 05 Feb 2020. Kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska fasaxo suuqa xagaagaan daafaca midig ee Joao Cancelo, kaddib markii ay hal xilli ciyaareed ka hor ka soo iibsadeen Naadiga Juventus. Cancelo ayaa Man City ku yimid 27 milyan oo gini oo lagu daray Danilo xagaagii 2019, laakiin […]Sii akhriso
(Turin) 05 Feb 2020. Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo dhaliyaha ugu halista badan kooxda Juventus iyo guud ahaan kubadda cagta caalamka waqti xaadirkaan ee Cristiano Ronaldo ayay maanta ku beegan tahay dhalashadiisa. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ayaa dunida ku soo biiray maanta oo kale 05 February sanadkii 1985-kii, waxa uu ku dhashay halka loo […]Sii akhriso
Wasaaradda Waxbarashada Dalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo isku raacay in la qaado imtixaanka shahaadiga ah “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)- Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaraddaha dowlad Gobaleedyada iyo Gobalka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo gaba gabeeyay shir ku saabsan imtixaanka Qaranka ee sanada 2019/2020, waxana ka soo qeyb-galay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Sii akhriso
Dawladda oo ciidamo la dagaallama Kooxda Al-Shabaab ku daabushay Gedo
Muqdisho (SONNA)- Dowladda Federaalka Soomaaliya dadaal uga jirta siddii guud ahaan Goballada dalka looga sifeyn lahaa Argagaxisada Al-Shabaab ayaa ciidamado geysay degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo.. Qaar ka mid ah Gobalada dalka ayaa maalmihii la soo dhaafey waxaa gaarey ciidamo si gaar ah u tababaran oo dowladda Federalka ugu talagashey in ay la dagaalamaan argagaxisada Sii akhriso